Iphrofayili yase China yoValo lweSango eliCwangciselwe iiNcango zangaphakathi zokwenza kunye neFektri | YALIS ukuhambelana namazwi
Iphrofayili yoCango lweSango eliCwangciselwe iiNgcango zangaphakathi
Ukugqiba okuqhelekileyo: umnyama omnyama nomnyama, umnyama omnyama nomhlophe
Faka isicelo se-YALIS encinci yokuphatha ucango kwiminyango engabonakaliyo, iingcango eziphakamileyo, ukukhulisa ngokupheleleyo izibonelelo zomnyango ngokwawo, ukwaphula amakhonkco emveli, kunye nokuqaqambisa umbono ongapheliyo woyilo lwekhaya liphela kwindawo encinci.
Ngentando yakho Product
Isibambo somnyango senziwe ngealuminium alloy, enokwenza ukugqitywa okufanayo nesakhelo somnyango wealuminium ukwandisa umbono obonakalayo ekhaya. Ukufakwa kwesiphatho somnyango esincinci kunokwenziwa ngezinto ezifanayo nomphezulu womnyango, owenza ukuba ube ngumdibaniso ogqibeleleyo nomnyango.
Ulwakhiwo lokuchasana nobundlobongela
UKUSETYENZISWA KWEZINTO ezininzi kunelungelo elilodwa lomenzi lokuvula ngokuchasene nobundlobongela. I-engile yokuvula yi-23 °, enokuthintela ngokufanelekileyo isibambo ukuxhoma phantsi kwaye ukhusele ukhuseleko losapho.
Magnetic Latch Tshixa
Uvavanyo lomjikelo wesitshixo semagnethi se-latch lufikelele ngaphezulu kwamaxesha angama-200,000 aqinisekisa ukusetyenziswa kwexesha elide. Kwaye imeko yesitrayikhi ehlengahlengayo yenza ufakelo ngokulula. I-latch yayo ye-alloy latch enomkhono wenayiloni ngaphandle, inokwenza ukuvulwa kunye nokuvalwa kakuhle kwaye kunciphise ukuphazamiseka kwengxolo.
I-YALIS ijonga iimveliso njengemisebenzi, kwaye iyawazi amava kuphela kwesitshixo kwinqanaba. Kwindlela eqhelekileyo yokwenziwa kwendlu iphela, i-YALIS ilandela umanyano lwesitayile sasekhaya. Ukuphindaphindeka, kuvumela izibambo zeminyango neengcango zincedisane.
Egqithileyo Umthengisi oMncinci wokuPhatha uMnyango oMncinci
Okulandelayo: Uyilo lweMinimalist yangaphakathi kwiiNdawo zeProfayili
Umthengisi oMncinci wokuPhatha uMnyango oMncinci